गर्मीमा शितलता प्रदान गर्ने दहीको के-के छ फाइदा जानिराख्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
यस्ता केही चिज दहीमा मिसाएर खाएमा शरिरलाई यसको दुईगुणा फाइदा हुन्छ
तपाईको बढी दुध पिउने बानी छ कि दहि ? स्वास्थ्यका लागी कुन बढी फाइदाजनक ?
ध बालबालिकाका लागि अनिवार्य खाद्यपदार्थ हो । बालबालिकाका लागि न्युट्रेसनको आवश्यकता हुने भएकाले दूध निकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
Don't Miss it शरिरका यी अंगहरु बारम्बार नछुनुहोस्, जसले निम्त्याउँछ संक्रमणको खतरा